Ukuhambisa iiWindows 7 kwiDrive Hard kwenye iKhompyuter | Iindaba zeGajethi
Uyisusa njani iWindows 7 kwihard drive kwenye ikhompyuter ngaphandle kokungqubeka
Ukuba unekhompyuter yakho ene-Windows 7 njengenkqubo yokusebenza engagqibekanga kwaye ufuna ukuhambisa le hard drive kwikhompyuter eyahlukileyo ngokupheleleyo, ukuba awamkeli inani elithile lamaqhinga ungafumana oqhelekileyo «isikrini esiblowu"ngenxa ye ukunqongophala kokuhambelana phakathi kwekhompyuter entsha kunye nabaqhubi efakwe kuhlobo lwenkqubo yokusebenza.
Ngokwamkela amaqhinga ambalwa esiya kuwakhankanya apha ngezantsi, siya kuba nakho ukubanakho susa i-hard drive ngeWindows 7 kwaye uyihambise kwenye ikhompyuter eyahlukileyo ngokupheleleyo, apho izakusebenza kakuhle (kunye nezithintelo ezimbalwa) kwaye ngaphandle kokufuneka nika isisombululo kule «blue screen» edla ngokuvela xa ezi ntlobo zemisebenzi zisenziwa.
1 Khubaza umqhubi jikelele wekhompyuter yomthombo
2 Sebenzisa i- "Hiren's Boot CD" ukuhlaziya umqhubi
Khubaza umqhubi jikelele wekhompyuter yomthombo
Umthombo wekhompyuter esidlulisele kuwo yile ine-hard disk ene-Windows 7 efakiweyo kwaye leyo sifuna ukuya kwiqela elahluke ngokupheleleyo. Siza kukhankanya uthotho lwamanyathelo alandelanayo ekufuneka uwalandele kule nkqubo yokusebenza, into enokuthi isebenze nakwinkqubo endala yeWindows XP ukuba ufuna ukwenza uhlobo olufanayo lwemisebenzi:
Cofa kwiWindows 7 Start Menu Button.
Yiya kwi «Iphaneli yokuLawula».
Ngoku khetha "Inkqubo noKhuseleko".
Kwicala lasekunene jonga "iNkqubo" uze ukhethe ukhetho ku "Umphathi wesixhobo".
Kufanelekile ukuba ukhankanye ukuba ubunokufikelela kule ndawo inye ukuba ubukhangela i "ikhompyutha yam" icon (hayi indlela yayo emfutshane) kwaye ucofe ekunene ukukhetha "iipropathi" kwimenyu yokuma. Ngaphandle kwako konke oku, nje ukuba unazo zonke izixhobo ekujongeni kwi window onakho yiya kwindawo yabalawuli be-ATA, ukukwazi ukufumana into efana kakhulu nento esiza kuyibonisa kwiscreen esilandelayo.
Kwimeko yethu sifumene isilawuli se-Intel, nangona uhlobo lwe-Via lunokubakho; kwangaxeshanye kufuneka ukhethe kwaye ukhethe ukhetho olunokukunceda «hlaziya umqhubi wakho«. Ukusuka kwiwindow entsha ebonakalayo, kuya kufuneka ukhethe ukhetho oluza kukuvumela ukuba ukhangele i-hard drive yendawo (hayi kwiziko lokuhlaziya kwiwebhu).
Uluhlu oluncinci luza kuvela kwangoko, apho kuya kufuneka ukhethe leyo ithathwa njengomgangatho (ngokomfanekiso esiza kubeka apha ngezantsi).
Xa ugqibile ngeli nyathelo ungavala iifestile ukwamkela utshintsho nokucima ikhompyuter, kufuneka uye kamva kwinxalenye yesibini yenkqubo yethu nalapho siza kusebenzisa isixhobo se-LiveCD esibizwa ngokuba yi "Hiren's Boot CD".
Sebenzisa i- "Hiren's Boot CD" ukuhlaziya umqhubi
Emva kokuba uvale ikhompyuter njengoko kucetyisiwe apha ngasentla, kuya kufuneka susa i-hard drive kwaye uyibeke kwenye ikhompyuter; Xa sele ukulungele, faka i-CD-ROM kuhlobo lwakho lwe-LiveCD IHiren's Boot CD kwaye uqale ngayo (ukwenza uhlengahlengiso ngokulandelelana kwi-BIOS). Xa ukhetho "lokuvula" luvela, kufuneka ukhethe leyo ibhekisa kuhlobo lobungakanani besixokelelwano esisebenzayo, into enokuba yi "Windows XP encinci«.
Xa le nkqubo yokusebenza igqibile ukusebenza kuya kufuneka ucofe i icon kwicandelo lasezantsi lasekunene ngokomboniso-skrini esiwubeke kwinxalenye ephezulu kwaye kamva, khetha umsebenzi othi kwimenyu yokuma "Ubhaliso ->" Lungisa isilawuli sediski enzima (fix_hdc.cmd) ".
Ngokukhawuleza ifestile yesiphelo yomyalelo iya kuvula ngeendlela ezintathu ezizodwa, onokuzibona phezulu. Kwimeko yokuqala, kuya kufuneka ucinezele unobumba "T" ukufaka ifolda "C: Windows", into ekule sixhobo ibizwa ngokuba yi "TargetRoot". Emva kwexesha kuya kufuneka ucofe iqhosha elithi «M», endaweni yoko Ukuhlaziya umqhubi ngokokutsho kwe "Hiren's Boot CD" Iskene kwi-BIOS yale khompyuter intsha. Xa zonke iinguqu zenziwe, ungayicima ikhompyuter kwaye uyiqale kwakhona ngendlela eqhelekileyo, akufuneki kubekho iingxaki ukuba inkqubo yenziwe njengoko besesitshilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Uyisusa njani iWindows 7 kwihard drive kwenye ikhompyuter ngaphandle kokungqubeka
Ndiyakuthanda enkosi =) gord @
Ezinye iindlela zokuguqula i-pendrive ye-USB ibe ngumfanekiso wediski
Ungazikhuphela njani iifayile ezininzi kwiiwebhusayithi ezinjenge-ftp?